Quraacda cayaaraha fudud: ku biirinta nafaqooyinka lagama maarmaanka ah | Ragga Stylish
Qaar ka mid ah fikradaha quraac ee cayaaraha
Khubaradu waxay kugula talinayaan in la sameeyo cuntada ugu horeysa ee maalinta, quraacda, hab dhameystiran, si hel nafaqooyinka jidhku u baahan doono.
Haddii aad sidoo kale tahay ciyaartoy, ama jimicsi badan sameeyo maalinta oo dhan, weli waa inaad wax cuntaa cuntooyinka culeyskoodu sareeyo tamarta.
Cuntooyinka aan cunno subaxnimada qeexaan awooddeena tamarta maalinta oo dhan. Kuma koobna cunista in ka badan quraacda, laakiin waa lagama maarmaan in la qaabeeyo cunto ku habboon waxqabadka la qabanayo.
1 Quraac Mareykan ah
2 Quraacda cayaaryahan caafimaad qaba
3 Quraacda tamarta
Quraac Mareykan ah
Rooti, ​​ukun shiilan, xaleef hilib doofaar ah ... tan menu laga yaqaan dalka Mareykanka waxaa si weyn loogu talinayaa ciyaartooyda.
Qaadashada kaloriinkan waxaa lagu dhammaystiri karaa a casiir dabiici ah ama xoogaa miro ah. Haddii aan nahay ciyaartooy oo aan dooranno muuska, waxaan heli doonnaa tabarucaad potassium ah oo muhiim u ah marka la sameynayo dhaqdhaqaaqa jirka.
Sidoo kale yogurt khafiif ah, smoothies, iwm waa mid aad u caafimaad qaba.. Si tan loo dhammaystiro, ciyaartooydu waxay si fiican u isticmaali doonaan xoogaa faybar ah.
Quraacda cayaaryahan caafimaad qaba
Kuwa go'aansada ama ciyaara kubada cagta, aada qolka jimicsiga, dabaasha, ama cayaaraha kale ee wadnaha, ilo wanaagsan oo badarka iyo rooti ah ayaa noqon kara xulasho wanaagsan.
La caano iyo kafee Waa shey muhiim u ah helitaanka borotiinka iyo firfircoonida murqaha. Ha iloobin inaad qaadato qadar wanaagsan oo miraha ah, hoostiisa oo aad isku soo uruurin doonto fitamiino iyo macdano.
Quraacdan ciyaartooydu waa inay noqotaa ay weheliyaan biyo badan iyo cabitaanada tamarta inta lagu jiro iyo kadib tababarka.
Haddii aan u baahanahay inaan tamar la aadno qolka jimicsiga, waa inaan xoogaa ku darnaa plugins dheeraad ah quraacda miraha iyo badarka. Waxaa jira fikrado badan: rooti, ​​ukumo, subag yar oo ku faafay rootiga, macaanka, saytuunka iyo saliidda yaanyada, ham, iwm.
Ilaha sawirka: Goldepenalti / Blogs Hello!
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Qaar ka mid ah fikradaha quraac ee cayaaraha
Muuqaal guud oo fudud oo lahjad diiran leh
Nadiifinta cuntada ee cuntadaada